Igumbi elifikelelekayo elinesidlo sakusasa sasimahla
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguSafala
Eyona nto ilungileyo edolophini enophononongo oluphezulu. Umbono ongaqhelekanga we-Himalaya ukusuka kwigumbi. Kulula ukuyifumana!! Uluntu olukhuselekileyo!! I-WiFi yasimahla !! Umamkeli ophendula ngokukhawuleza!! Iibhedi eziphindwe kabini!! Imizuzu emi-4 kude neLakeside (indawo yabakhenkethi enechibi, imivalo) imizuzu emi-6 ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi kunye nemizuzu eli-9 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kwikhabhathi (). Igumbi labucala elineshawa & nendawo yokuphumla (encanyathiselwe). . Isidlo sakusasa esipheleleyo kuzo zonke iindwendwe kwaye sibonelela ngamanzi ahlambulukileyo simahla. Idilesi egcweleyo nezalathiso ziya kufumaneka xa ubhukisha.
Iphangalele kakhulu, kwaye inamaso ama-2 acocekileyo aphindwe kabini. Akukho kucoca okanye naziphi na ezinye iintlawulo ezifihliweyo. Inegumbi lokuhlambela elineshawa eshushu nebandayo. Nje ukuba uphume ngomnyango wegumbi uya kuba kwi-terrace. Uya kubona iintaba kunye nechibi (kodwa kude kakhulu) kanye ukusuka kwindawo yakho ephezulu. Igumbi lakho lelona liphezulu, lahlukileyo, likhululekile kwaye likhululekile.
Ukwaneliseka kwakho ngokupheleleyo yeyona mpumelelo ilungileyo kuthi.
Luluntu olulungileyo lubekwe kwindawo esembindini. Uya kubona abantu abaninzi beza epakini. Kupholile ukubona ukusuka phezulu. Isekunene kufutshane nesikhululo sebhasi kunye nendawo evulekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Safala
Indlela oyithandayo. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi okanye ukwabelana ngamabali ohambo lwakho kwaye ufuna iingcebiso sivulele yona. Asiyi kungena egumbini lakho xa ungekho kwaye ubukho bakho siya kunika isaziso ngaphambili ukuba sifuna naluphi na ucoceko. Sinenkathalo kwaye siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zethu . Nceda ungene kuthi ukuba kukho into engalunganga.
Indlela oyithandayo. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi okanye ukwabelana ngamabali ohambo lwakho kwaye ufuna iingcebiso sivulele yona. Asiyi kungena egumbini lakho xa ungekho kwaye ubu…